Date My Pet » 5 Types Of Daters First. Nderipiko You?
Pane sayenzi nezvokudanana. Kudanana upenyu zvinogona kufananidzwa kemisitiri kuedza kwauchada iwe wako musi mukwanisi mumwe uye kuguma yakanaka kukwezvwa.
A inobudirira musi kunoenderana kugarisana pakati daters. Uye achiziva hworudzii dater muri kunogona kukubatsira kubudisa zvakawanda yako zvakanaka zvatariswa pasina zvinopesana ani chaizvo.
saka, hworudzii dater waungati muri?
Kana uri pamusoro-aitaurisa, imi muri kupfuura kunge ane extrovert. Dzimwe nguva chipo ako gab ane chokuita tsinga uye zvishoma chokuita kudiwa kutaura. Imi dzimwe nguva akacheka vanhu kure kana vachikurukura, kwete chinangwa chokwadi, uye hauna dambudziko kuwana mashoko akakodzera kana mumwe munhu akakubvunza kuti kuvaudza nezvako. Uchava kudzidza kuteerera chete uyewo uchitaura. Unoda nechokwadi chokuti iwe musi vari pakuziva mumwe. Kuita izvi kuchakubatsira kuona kana iwe vaviri uri wega yakanaka kana asingaenderani.
Ms. & Mr. isu
Kuwana munhu anogona kuva zvakafanana anoda uye shamwari zvakakosha dater wokutanga ichi. Munoita pfungwa iyi zvakajeka pamusoro rokutanga pamusi. Usati waita yakawanikwa kuziva zuva rako, imi kurumidzai kuita zvirongwa kuti zuva rechipiri uye kunyange getaways pamwe. Ungave kutanga mitsetse zvako vakawanda "tinogona chiri" uye kwete zvakakwana "Ndine." Izvi zvinogona kupa zuva rako pfungwa yokuti uri chikwekwe kana kudzora kunyange kana usiri uye inogona kuva nazvo kuronga mbudo zvavo pamberi hweta anogona kupa dhizeti. Hapana chakaipa manzwiro ako nezvekubva pamusi yako yokutanga inotevera padanho, chete nechokwadi imi kuona kana zuva rako anoda sewe.
Muri chokwadi akazvimirira uye hamutsvaki mumwe munhu kana chinhu kuti hunotsigira ndiwe. Rusununguko kuchikosheswa iwe uye chero kutyisidzira naro awana cutout hwako. Rambai nezveizvi: kana iwe kutumbura nesimba kwete vanoda munhu kana kungokurumidza untamable, kunogona dzoro-kure zvevakomana yako. Munhu wese anoda kunzwa vaida vamwe vachikwanisa. Kana muchida kufambidzana uye havadi kupa zuva rako pfungwa kuti uchaita kuda zvakawanda chero nguva pfupi, vanoti. Musi wokutanga ndiyo yakanakisisa nguva kuisa zvinhu zvose pasi petafura.
Kana uri kwakadai dater, unotoziva mhando munhu zvaunoda pasi aesthetics. Iwe vakatoedza hwenyu vakaronga pamusoro pre-akaronga purogiramu mikuru upenyu zviitiko zvakafanana muchato uye vana. Usati funga pakurera akanaka muchato urongwa yenyu zuva rokutanga, edzai mvura zuva rako uone kana zvinangwa zvako uye zvinangwa zvienderane vakakwira. Zvinogona kutyisa munhu kunzwa nezvezvinhu zvine chokuita kuzvipira kana vanongoda munhu kuenda kufirimu.
Kungofanana wokwako idealist kumusoro, munoziva zvaunoda asi imi muri zvishoma zvikuru achifunga sei zuva renyu kunoita mari yavo. Une muchinyatsochenjerera pfungwa sei vanofanira vanounganidza vakakwira panyaya simba ravo uye mari. Ndiani vanoshanda kuti kana kushandiswa kushandira ndiko zvinochinja kunzwisisa kwaunoita ndivanaani. Kuziva zvauri kuda kana totaura zvose zvoupenyu iguru. Ngatiedzei kuva zvishoma zvikuru yakazaruka misi nevanhu vasingadi zvachose kusangana dzenyu zvinodiwa. Ungashamisika kana ukawira kuti munhu hakukodzeri vavariro dzakanaka yenyu, zvinoitika.